.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: ဇေရဲ – လေးစားမှု (Respect) Album
ဇေရဲ – လေးစားမှု (Respect) Album
ဇေရဲ – လေးစားမှု (Respect) Album တစ်ခုလုံး လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းအတွက် ဒီနေ့တော့ တင်ပေးလိုက်ပါပြီ။
ဆိုဒ်တော်တော်များများမှာတော့ တင်ထားပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့သီချင်းတွေဆိုရင် ဖိုင်ဆိုဒ်က4MB ထက်ကို
ကျော်နေတာတွေတောင် ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အကုန်လုံးကို Audio Bitrate 64 နဲ့ ချုံ့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အားလုံးပဲ အဆင်ပြေပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေလို့..။ ကူးယူမျှဝေမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့်ဆိုဒ်ကို Credit ပြန်ပေးကြပါရန်။
ဘာ..ဘာ..ဘာ.. ဇေရဲ Vs သဲချစ်ကို Click Here ! Click Here ! 1.20 MB
ဂိမ်းပါတီ Zay ye Feat- Hlawn Paing Click Here ! Click Here ! 2.20 MB
ဟိတ်အချစ်ဆုံးနေပါဦး Zay ye Feat- U Zaw Min Lay Click Here ! Click Here ! 1.45 MB
ဟိုက်ရှားပါး Zay ye Feat- Thar Gyi Vs MHL Click Here ! Click Here ! 1.80 MB
Ice Cream ဇေရဲ Click Here ! Click Here ! 1.55 MB
ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်း (Rebirth) ဇေရဲ Click Here ! Click Here ! 2.00 MB
အမှတ်တရအနမ်း ဇေရဲ Click Here ! Click Here ! 1.60 MB
လေးစားမှု (Respect) ဇေရဲ Click Here ! Click Here ! 1.38 MB
ငွေရောင်လက်စွပ် ဇေရဲ Click Here ! Click Here ! 1.87 MB
ကျောင်းသားဘ၀(၂) ဇေရဲ Click Here ! Click Here ! 1.64 MB
တက္ကစီ ဇေရဲ Click Here ! Click Here ! 1.63 MB
သတိရညနေခင်း Zay ye Feat- ရဲလေး Vs KH$ Click Here ! Click Here ! 2.35 MB
Posted by Thurainlin at 06:58